Javier Mascherano oo aaminsan in Messi uu xirfaddiisa kubadda cagta ku soo gabagabayn doono meel aan ahayn Barcelona – Gool FM
Madaxweynaha Juventus ee Andrea Agnelli oo ka hadlayay wararka la xiriirinaya Pep Guardiola
Javier Mascherano oo aaminsan in Messi uu xirfaddiisa kubadda cagta ku soo gabagabayn doono meel aan ahayn Barcelona
Haaruun January 23, 2020
(Barcelona) 23 Jan 2020. Jookarkii hore ee kooxda kuabdda cagta Barcelona ee Javier Mascherano ayaa ka hadlay fikirkiisa ku aaddan halka uu Messi kusoo gabagabayn doono xirfaddiisa kubadda cagta.
Javier Mascherano, kaasoo hadda ka tirsan Kooxda Estudiantes de La Plata ayaa meesha ka saarin inuu dib ugula midoobi doono Lionel Messi, Argentina Superliga mustaqbalka.
Xiddigii hore ee Kooxda Barceloa oo 35-sano jir ah ayaa dib ugu laabtay bishaan kooxda dalkiisa hooyo ka dhisan ee Estudiantes muddo 15-sanadood ah kaddib markii uu ka soo tagay River Plate.
Waxaana uu rumeysan yahay Mascherano in xiddigii hore ee ay isku kooxda iyo xulkaba ahaayeen ee Leo Messi inuu tallaabadiisa oo kale soo qaadi karo, isla markaana uu dib ugu soo laaban karo Koonfurta Ameerika.
“Wax walba ayaa ka dhici kara kubadda cagta adduunka, waxayna ku xiran tahay hammigiisa inuu ka ciyaari Argentina” ayuu Javier Mascherano Wargeyska Sport.
“Waxaa kale oo jira dhinaca qoyska marka uu go’aansado inuu halkaan ku noolaado, kuwaani waa arrimo shaqsiyadeed mana jiro cid kale oo iyaga saamayn ku yeelan karta.”
“Haddii uu go’aansado inuu halkaan yimaado mustaqbalka, waxay ku noqon lahayd mid tayo sare leh u leh horyaalkeenna iyo dalka.”
Mascherano ayaa si cad u sheegay in aan la isla barbardhigi karin dib ugu soo laabshadiisa Waddanka waqtigan iyo marka uu Messi waddankiisa dib ugu soo laaban doono isagoo yiri: “Soo laabashadayda waxba ma’ahan marka loo eego Leo, maxaa yeeelay isagu waa ciyaaryahanka ugu fiican adduunka.”
Si kastaba ha ahaatee, Kabtanka Barcelona iyo Xulka Argentine Leo Messi ayaan wali la ogayn waqtiga uu soo gabagabayn doono xirfaddiisa kooxda Barcelona, inkastoo Wareysiyo hore uu u bixiyay uu ku sheegay in mar uun uu dib ugu laaban doono Waddankiisa hooyo.
Chelsea oo baadi goobeysa badelka goolhayaheeda Kepa Arrizabalaga
DEG-DEG: Inter Milan oo la wareegtay xiddig ka tirsan kooxda Chelsea